Sampana Sekoly Alahady - ZOARA FANANTENANA
28. mai, 2013Non classé Commentaires fermés sur Sampana Sekoly Alahady
Santa-bokatra sy santam-piaraha-miasa vaovao
Nakotrokotroka ny fankalazana ny santa-bokatry ny sampan Sekoy Alahady teto amin’ny FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo ny alahady 19 may lasa teo. Nifanindry indrindra ihany koa tamin’ny fankalazana ny pentekôsta izany. Ny tenin’ny Soratra Masina notsongaina tao amin’ny Filazantsara nosoran’I Jaona 21: 15-16-17 manao hoe:” Fahao ary ny ondriko, fahano ary ny ondrikelik.o” no nanompanana ny Fankalazana. Ny santa-bokatra dia fotoana ihany koa hitaizana ny Sekoly Alahady amin’ny fanompoana amin’ny alalan’ny fanolorana ny vokatra. Samy nanao izay ho afany tamin’ny fanoloran-tenany amin’ny alalan’ny vokatra ny ankizy tato amin’ny sampana. Nisy ny nitondra zavatra, izay navadika ho vola ary teo ihany koa no nitondra vola. Tamin’ny fony tokoa no nanaovan’ireo izany fanompoana izany. Nanohana ny sampana amin’ny fitaizana ireo ondrin’I Jesoa ny Fiangonana tamin’ny vokatra nataony.
Raha ny fanompoam-pivavahana lehibe no nanombohana ny tontolo andro maraina dia nisy kosa ny fampisehoana nokarakarain’ny Sampana ny alahady tokalandro. Nisy hatrany ny hafatra nampitaina nandritra izany rehetra izany. Ny tarika Menafify no nanafana ny fotoana. Teraka tamin’io ihany koa ny fiaraha-miasa vaovao ho an’ny tarika sy ny sampana. Amin’ny maha-tompom-pety ny sampana Sekoly alahady dia nanaingo ny fampisehoana tamin’ny alalan’ny dihy izy ireo. Afa-po na ny mpijery ny na ny mpihira. Fahombiazana ny fiaraha-miasan’ny roa tonta teo ambany fiahian’I Jesoa Kristy. Naniry ny hiara-hiasa amin’ireto ondrikelin’I Jesoa ireto ny tarika Menafify amin’ny fampisehoana hataon’ny amin’ny manaraka.
Efa manomana ny fanadinana karakarain’ny foibe FJKM ny sampana Sekoly Alahady eto amin’ny FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo. Ho fanomanana izany dia hisy ny fanadinana andrana hatao ny 09 Jiona ho avy izao. Raha tsy misy ny fiovana dia eo anelanelan’ny fanadinana BEPC sy BAC no hampanaovan’ny sampana Sekoly alahady foibe ny fanadinana.
Misy 800 eo ho eo ny Mpianatra Sekoly alahady eto amin’ny Fiangonana Zoara Fanantenana Ambohipo. Mila fanohanana izy ireo, araka ny baikon’ny Tompo hoe: “Fahano ary ny ondriko”.